Ebee ka ndị France na-ahọrọ ịzobe Sextoys ha? - AHUIKE tinye MAG - TELES Relay
Ebee ka ndị France na-ahọrọ ịzobe Sextoys ha? - AHUIKE tinye MAG
L'nyocha bụ nke Institutelọ Ọrụ French nke Opinion Public (Ifop) rụrụ na nnọchi anya nke ndị French 2000 maka ndị na-eme ihe ike na saịtị passagedudésir. Na-elekwasị anya n'ịdị mma nke inwe mmekọahụ, ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ọha na nwanyị na-enwe mmekọahụ na mba niile ma na-akọwapụta ihe dị ogologo na-adịghị mma na ọha mmadụ na ndị di na nwunye
Sextoys: ebe kachasị amasị ndị French
Mgbe ha jụsịrị ndị na-eso ụzọ banyere ebe nzuzo kachasị amasị ha maka ihe egwuregwu ụmụaka, ihe ọmụmụ a chọpụtara na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ họọrọ maka ngwọta aka, ya bụ tebụl n'akụkụ akwa. N'ọnọdụ nke abụọ, anyị na-ahụ ụlọ mgbakwasa, na-esote ebe nzuzo dị mma: n'okpuru akwa. N'ikpeazụ, obere akụkụ gosipụtara ebe dị ịtụnanya iji zoo ihe egwuregwu ụmụaka. N'ezie, dịka nzaghachi ndị ahụ si kwuo BFM TV, 1% nke ndị France na-ezo ha na kichin ha!
Nri abalị - Isi mmalite: Obi Radio
1 n’ime 3 ndị France achọpụtala mmekọahụ nke onye ọ hụrụ n’anya
Ọ bụ ezie na nsonaazụ nyocha ahụ nwere ike ime ka ị mụmụọ ọnụ ọchị, data ndị ọzọ nwere ike iju gị anya. Na ezi ihe kpatara ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 33% nke ndị France ekpughela na ha achọpụtala mmekọahụ nke otu n'ime ndị ikwu ha, na-egosighi ma usoro a ọ bụ afọ ofufo. Ọbụna ozi ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe: 22% enweghị ike icheta ebe ha tinyere ya!
Ojiji nke ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyi na abawanye
N'igosipụta mmasị na-eto eto nke French maka ihe egwuregwu ụmụaka ndị a, nnyocha ahụ gosikwara na na 2020 na maka oge mbụ, Ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ ejirila mmekọahụ mee ihe karịa ọnụ ụzọ ihe atụ nke 50%. Na 1992, nke ikpeazụ a bụ 7% wee rute 48% na 2017. Taa, ọ dịkwa ka agụụ alụm di na nwunye maka ndị mmekọ a na-akpali agụụ mmekọahụ na-arị elu. 46% kwuru na ha ahụtala ya dịka duo, ma e jiri ya tụnyere 34% nke ndị France iji ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyi maka obi uto. A na-ahụ ihe egwuregwu ụmụaka dị ka ndị na-eme ka obi dị ụtọ
Ọ bụrụ na nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ ugbu a, ọ kachasị karịa n'ihi na a na-agbanyekwu iwu bara uru ngwa iru ecstasy. Dabere na nyocha Ifop, 69% nke ndị a gbara ajụjụ ọnụ bụ ndị sorolarị onye ọlụlụ ha gosipụtara na ọ meela ka agụụ mmekọahụ ha mee ngwa ngwa. N'echiche a, François Kraus, onye na-arụ ọrụ n'ọmụmụ nyocha echiche, na-eche na agbanyeghị na ojiji ha ka metụtara masturbation, nyocha ahụ gosiri na n'eziokwu, ọ na-eme ka ọ dịkwuo mkpa na ọnọdụ alụmdi na nwunye. N'ezie, iji mmekọahụ eme ihe na-akwalite omume ntụrụndụ ma na-akwalite ụkpụrụ nke ịkekọrịta n'ihe banyere orgasm.
Mmekọahụ na-eme ka ndụ nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ - Isi Iyi: Onwe
Ojiji nke sextoys n'ime di na nwunye na-eme ka ndu nwoke na nwanyi di nma
N'ịbụ akụkụ dị mkpa nke usoro mmekọahụ nke ọtụtụ ndị di na nwunye, iji mmekọahụ eme ihe na-aghọwanye ọchịchị onye kwuo uche ya iji weta ihe na-esi ísì ụtọ n'oge ịme ịhụnanya. Marie Tapernoux, ọkà mmụta banyere mmekọrịta nwoke na nwanyị, na-akọwa na ngwa ndị a na-akwalite nchọpụta mmekọahụ n'ụzọ ezi uche dị na nnwere onwe. Site n'imebi usoro, ihe ndị a ga-ewetara di na nwunye obi ụtọ ma gbakwunye mmetụta ọhụrụ maka di na nwunye ahụ. Ma nke a gụnyere iji ha naanị, na abụọ ma ọ bụ na ntughari, ọ ga-emekwa ka ndị mmekọ abụọ ahụ dịkwuo n'otu n'ihi na nchọpụta ọ bụla dị na duo nwere ikike iji wusie njikọ ahụ ike. Ọ bụkwa ohere kwuo banyere echiche ya enweghị nkwanye na ịgwa ndị ọzọ ihe masịrị anyị ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, na-akpata nkụda mmụọ. Na ezi ihe kpatara ya, ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị na-anọchi anya ụzọ dị mkpa iji nye azịza iji kwalite ọ sharedụ. N'ezie, a gha ime nke a site na nkwekọrịta na ịkwanyere echiche onye ọ bụla ùgwù. Inwe nkwuwa okwu n’ezoghị ọnụ nwere ike ịbụ ihe mbụ ị ga-eme.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/ou-les-francais-preferent-ils-cacher-leurs-sextoys/
Central African gọọmentị gbara arụkwaghịm
Ma lo quiere el Diablo ma o bu lo quiere Dios - Video